Ukukhulisa Impumelelo Yokuthuthukisa Imiphumela | Martech Zone
Ukukhulisa Impumelelo Yokuthuthukisa Imiphumela
NgoMsombuluko, Ephreli 13, 2009 NgoLwesibili, Okthoba 9, 2012 Douglas Karr
Ibhulogi kaTripp Babbitt nezincwadi zezindaba zivuliwe Ukucabanga Kwamasistimu Amasha bekulokhu kukhula kimi ngempela.
Selokhu ahlangana noTripp emcimbini wokukhuluma wesifunda, wabelane nami ngethoni lolwazi nesipiliyoni sakhe ngqo, encwadini yakhe yezindaba, naku-blog yakhe.
Esinye sezizathu engicabanga ukuthi ngikujabulela ukubhala kwakhe nezifundo zakhe kakhulu ukuthi uTripp uhlaziya ngolaka amabhizinisi futhi uvame ukuthola ukuthi izilinganiso nezinhloso akuhambelani nezinkinga zangempela.
I-Case in point kwakuyinkampani elinganisa inani lamakholi wokusekelwa kwamakhasimende futhi ivuze amaqembu ayo wamakhasimende ngokususelwa kumthamo wezingcingo akwazi ukuwuqedela. Njengoba uTripp echaza, inkampani ayizange ihlaziye ukuthi kungani bethola izingcingo nokuthi izindleko zethimba lenkonzo yamakhasimende bezinjani uma kuqhathaniswa nokulungisa izinkinga zezimpande lokho kudale izingcingo kwasekuqaleni.
Inkinga kanye nophawu luhlukaniswe phakathi kweminyango emibili engasebenzisani futhi engenazo izinhloso ezifanayo. Akunanzuzo ukulungisa inkinga yoqobo ngoba izinkinga ezibangelwa zona zivele zinikezwe umnyango olandelayo.
Isikhathi esithile bengingummeli we ukuthola ukuthi yini okusebenzayo nokuyihlela kahle, kunokugxila kokungasebenzi.
Kuningi kakhulu abaholi abadumile nezinhlelo zebhizinisi ezikholelwa kokuhlukile… zizokutshela ukuthi uma uphumelele ngama-99%, kufanele ngabe usebenzela ukuthuthukisa lelo 1% lokugcina. Kuyinqubo ekhungathekisa ngokungapheli futhi ishiya umkhondo wabasebenzi abaxoshiwe nabakhungathekile.
Ngikholwa ukuthi abaholi abaphumelelayo, izinkampani namasu kukhulisa impumelelo kunokuzama ukunciphisa ukwehluleka:
Ezinkundleni zokuxhumana, bengingummeli we ukunika amandla nokunika amandla izinkampani ukusebenzisa izinkundla zokuxhumana kunokuba usebenzise imithetho nemingcele.
Ekubhulogi, ngizama ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe engikubhalayo kumayelana nakho konke ukukhuthaza abafundi ukuzama ubuchwepheshe obusha kunokuzigwema.
Njengomholi, ngiyakholelwa ku ukufanisa ithalente labasebenzi nezidingo zenhlangano kunokuba uzame ukuphoqelela abasebenzi ezikhundleni zokwehluleka okuqinisekisiwe. Uma une-wrench, ungayitsheli ukuthi akusona isando esihle. Hamba uyothatha isando uma ngabe yilokho okudingayo.
Ekumaketheni okuku-inthanethi, kubalulekile ukuthi uqhubeke nokwenza okusebenzayo ngokuthengisa kwakho okuku-inthanethi kunokuba uzame ukuthola ukuthi yini engakaze isebenze. Vele kufanele uzame lapho kuvela amathuba, kepha cindezela izethameli zakho zibheke empumelelweni kunokuzama ukugwema ukwehluleka.
Noma ngingumzali, ngithole le ndlela inempilo enhle kakhulu. Uma izingane zami zazithanda iMath (ezenzayo) kodwa zingazithandi izifundo zeSocial Studies, angizange ngizenze zifunde izincwadi zomlando njalo ebusuku… Ngazikhuthaza kakhulu kwiMath. (Bengifuna amamaki ahloniphekile kuzo zonke izifundo, noma kunjalo). Zombili izingane zami zinamamaki amahle… futhi indodana yami manje isiyisitshudeni se-honours e-IUPUI, kwiMath neFiziksi.
Bengifunda ngisho kwa-Sparkpeople, indawo yethu kulabo abakhuluphele ngokweqile futhi abafuna ukuba nempilo enhle, ukuthi izifundo zakamuva zikhombisile ukuthi abantu ukuzivocavoca imizuzu engu-10 ngosuku babe nempumelelo enkulu kunalabo abasebenza imizuzu ebekiwe engama-90. Ukuzivocavoca okufushane kunikeza umuzwa wokufeza okuthile (esikhundleni sobuhlungu) futhi abantu bebenamathuba amaningi okunamathela esimisweni.
Tags: shintsha ukuphathwathuthukisa imiphumelawandise impumelelo
Ukulinganiswa Kwemidiya Yezenhlalo kufanele!
Ngo-Apr 14, i-2009 ku-9: 04 AM
Okuhlekisayo ubhale ngalokhu namhlanje, ngoba izolo nje ngihlangane noCarla no-Anna we-Ignite HR Consulting futhi baxoxisana ngohlelo lokuqeqesha abaluphethe olubizwa nge- “Strengths” oluzwakala luncomela kulokhu okuthunyelwe. Engikuthathe ngukuthi uhlelo lweStrendths - kunokufuna ukuqinisa ubuthakathaka - lusiza umuntu ngamunye ukuthi abone amandla akhe, okusho ukuthi yini akwaziyo nokuthi yini ayithandayo, ukuze bakwazi ukwenza okuningi kwalokho ukuze kuzuze inhlangano kanye nenhlalakahle yabo.
Ngokufanayo, ngokuya ngeminyaka ngiye ngafuna ukubeka amandla ami amaningi kulezo zinto engikwazi ukuzenza futhi engizijabulelayo, ngoba: a) kukhona amahora amaningi kuphela ngosuku (nasempilweni), ngakho-ke kungani ungazami ukwenza ngcono engikwaziyo; b) kukhona okungaphezu kokwanele okufanele ngikwenze engingakuthandi noma engingakujabuleli; futhi c) inika amandla wokwakha impumelelo empumelelweni (noma ngabe yimpumelelo enkulu noma emincane, ngoba ngithatha engingakuthola. :)).
Ube nosuku oluhle, mngani wami.
Ngo-Apr 14, i-2009 ku-10: 16 AM
Ukugxila kokuhle nokuthi yini oyithandayo. Angiyena umklami wewebhu futhi noma ngizama angisoze ngazama ukuyazi kahle. Kukhona abanye laphaya phansi komgwaqo abazokwenza umsebenzi ongcono kunami bese bewenza ngaphandle kokukhungatheka okuncane. Ngidinga ukugxila kokungisebenzelayo nokuthi yini engikwaziyo ukuyenza futhi ngibe ngcono nakakhulu kulezo zinto.